चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ५.५९ प्रतिशत रहने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ५.५९ प्रतिशत रहने
आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:४५ मा प्रकाशित !
काठमाडौं ,जेठ १३। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिको मूल्यांकनसहितको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको आर्थिक स्थितिको मूल्यांकनसहितको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका हुन्।
आर्थिक सर्वेक्षणमा चालू आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ५९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिव्यक्ति आए १ हजार ४ डलर पुग्ने अनुमान पनि गरिएको बताए। आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकमा अहिले पनि ८० लाखभन्दा बढी जनता गरिवीको रेखामुनि रहेको औंल्याइएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा राजस्वको वृद्धि सन्तोषजनक रहेको, देशका सबै ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच पु¥याउने काम भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न थालेको बताउँदै सरकारी खर्च बढन भइ बजेट घाटा बढन थालेको बताए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सेयर बजारस्थिरता उन्मुख रहेको दावी समेत गरिएको छ। सरकारले आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। त्यस अघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्ने परम्परा रही आएको छ।
PREVIOUS POST Previous post: गर्भवतीलाई किन लाग्छ वाकवाकी ? यस्तो छ डाक्टरको भनाई
NEXT POST Next post: रोहितको उत्कृष्ट ब्याटिङमा एपिएफको जित, प्रदेश ७ ले कर्णालीलाई हरायो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:४५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:४५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:४५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:४५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:४५